♪ Angel Shaper: ၂၀၁၀ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်မှာ ကျရောက်တဲ့ ၆၂ကြိမ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ အမှတ်တရ
ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို ခုလိုမျိုး သိခွင့်ရလိုက်တဲ့
အတွက် ဖြူစင်ကြယ်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အားလုံးဟာ မြန်မာပြည်ဖွား
ကိုယ့်အမျိုး ကိုယ့်မြေ မမေ့တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ပါစေဗျာ
ဒီလိုရေးလိုက်တော့ ချင်း လူမျိုးအကြောင်းသိရတာပေါ့ဗျာ
ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ကို တန်ဖိုးထားတတ်ပြီးစောင့်ရှောက်နိုင်ပါစေဗျာ
ချင်း အမျိုးသားနေ့အကြေင်းလေးကို ဗဟုသုတရလို့
ချင်း အမျိုးသမီးရေ...း )
အမတွေ့ကြုံဘူးခဲ့တဲ့.. ကချင် ကရင် ချင်း အစရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ.. ပွင့်လင်းတယ်။ ရိုးသားတယ်။ မကောက်ကျစ်တတ်ဘူး။ အဲဒါ အသေအချာပဲ။
တိုင်းရင်းသားတွေက အရောင်မဆိုး ပါဘူး။ ဖော်ရွေကြတယ်။ စိတ်ရင်းကောင်းကြပါတယ်။ တချို့ တွေလောက်ပဲ ကောက်ကျစ်ကြတာပါ။
အမလဲ ကရင်ကို ချစ်တယ်။ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရတာကိုလဲ ဂုဏ်ယူတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမက မြန်မာတောထဲကြီးခဲ့ရတာ..။ညီမဆက်ရေးမဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသားအကြောင်းတွေ ဖတ်ချင်ပါသေးတယ်။
အော်ဟော် နာက တူများ တဂယ်တိတရားရို့ အခုဒေါ့ တူက အလှူ့လက်ဖက်နဲ့ ညက်နှာ ရုပ်တယ်ပေါ့ရေ ဟတ်ရားးး ဟွန်းးးးးးးး
ဘာပဲပြောပြောလေ ကိုရီနိုပြောသလိုပေါ့ အားလုံးက မြန်မာပြည်ဖွားတွေပဲမလား
ဟေးးးးးးးး နင့်ကို ဘဲတင်းနေတယ်နော် ဟိဟိ ခေါင်းကြိမ်းဖို့သာပြင်ထား ဒါဗြဲ ပြောမယ် ဟက်
တွားဒေါ့မယ်အေ နော် တာ့တာ ဒုန်းးးးးးဒုန်းးးးးးးးးးးးဒုန်းးးးးးးးးးးး ဂလုံးးးးးးးးးး ဂလွမ်းးးးးးးးး ဖုံးးးးးးးးးး ဒိုင်းးးးးးးးးးး ဟိဟိ ဝက်နဲ့မလွတ်လို့ အကုန်တိုက်ကုန်ပြီ ဟဲဟဲ ချော်တီးးးး
တောင်ဇလပ်ပန်းနဲ့လှနေတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသူလေး သမီးကြီး အိန်ကျယ် ...မယ်မယ်ကိ မွေးရကျိုး နပ်တယ် ကွယ် ။
တို့ တတွေ့မြန်မာပြည်ဘွား တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ ရိုးသားကြိုးစားကြပါရဲ့နဲ့ ၊ တပါးကျွန်အောက်မှ စည်းလုံးစွာ ရုန်းထွက်နိူင်ခဲ့ ကြ ရဲ့နဲ့ ။ ခုတော့ လူတစုအောက်မှာ ဖိနှိပ်ညှင်းဆဲ ခံနေကြရတာ ရင်နာစရာပဲ...
( ဝက်တကောင် တော့ ဝက်မလွတ်ငှက်ပျော တွေ စွတ် စား နေတယ်နော် ..ကြည့်ထိန်း အုံး...း)))) )
ဗဟုတုတ အများကြီးရလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်စရာ ချင်းအမျိုးသားနေ့ဖြစ်ပါစေဗျာ။ ကိုယ့်ကံကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးခွင့်နဲ့လည်း ပြည့်စုံပါစေ။
တော်လိုက်တာ ငါ့တို့အမျိုးသားနေ့တောင် ဘာမှန်းမသိဘူး။ ဂုဏ်လည်းယူပါတယ်။ စောင့်လေမျိုးနွယ်ဆိုတဲ့ ဝတ်တပါးကို ထမ်းဆောင် ဒါလည်း မင်္ဂလာတပါးပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေ ပွင့်လင်းတယ် ရိုးသားတယ်။ ငါအားကြီး သဘောကျတယ်။ ချင်းလူမျိုးတွေ တောင်ဇလပ်ပန်းလိုပဲ ချင်းပြည်နယ်က ခွဲခွာလာရပေမယ့် ရိုးသားခြင်း ဂုဏ်သတင်းတွေ မွေးပျံနေပါစေ။ ချင်းလူမျိုးတွေ အောက်ချင်းငှက်တွေလိုပဲ တခြားတနေရာရောက်နေပေမယ့် သစ္စာတရားတွေ တည်မြဲနေပါစေ။
ညီမရေ ချင်းတောင်ကို ပြန်လွမ်းသွာပြီ။ မအယ်လည်း တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင်လေ ၁၉ရက်နေ့ ချင်းတောင် ရောက်တယ် နောက်နေ့က အမျိုးသားနေ့ ဖြစ်နေတယ်။
သော့က ခုခေတ် ခတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပစ္စည်းကတော့ မပျောက်ဘူး။ စက်ဘီးတွေဆို တောင်ဇောင်းမှာ ဒိတိုင်း ရပ်ထားခဲ့တာပဲလေ။ အိမ်ရှေ့မှာ ဆတ်သား ဂျီသား ဒိတိုင်း လှန်းခဲ့တာပဲ။ ဘယ်တော့မှ ပျောက်တယ် မရှိဘူး။
ညာလည်း မပြောကြဘူး။ အံ့ရောလေ။ ငါ အိုက်ဇောကို ကုန်ကူး သွားမလို့ နေမကောင်းဘူး ရေးပေးပါတဲ့လေ။
တောင်ဇလပ်ပန်းတွေ ကျောက်တိုင်တွေ ခေါင်ရည်တွေ ထောပတ်သီးတွေ တောင်ပတ်လမ်းတွေ လွမ်းစရာပဲ ညီမရေ။
သူငယ်ချင်း ချင်းမလေး အိန်ဂျယ်
ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီးခွင့် ဆိုတဲ့ စကားလိုပဲ ကိုယ့်လူမျိုးရဲ့ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာတွေ ဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါစေ...
တောင်ဇလပ်ပန်းလို ကြံ့ခိုင်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ဓါတ် ၊ အောက်ချင်းငှက်လို သစ္စာတေးသွားသီလို့ချင်းတိုင်းရင်းသားအားလုံးရဲ့အမျိုးသားနေ့ကမ္ဘာတည်သရွေ့တည်ပါစေ.....
သမီးကြီးရေ...ဗဟုသုတတွေရလို့ ကျေးဇူးနော်....ချင်းမလေးရယ် တောင်ဇလပ်ပန်းရယ် အောက်ချင်းငှက်ရယ် ပြီးတော့ “ ရိ ”ရေကန်ရယ်.. အတူတူတွဲပြီး မြင်ယောင်မိပါတယ်....
ချင်းအမျိုးသားနေ့ကတော့ ချင်းအမျိုးသားနေ့ပါပဲ။ သတိရစေချင်တာ တစ်ခုက... ချင်းပြည်နယ်ပဲ ရှိတယ်၊ ချင်းလူမျိုးဆိုတာက ချင်းပြည်နယ်ကမို့လို့ ချင်းလူမျိုးလို့ခေါ်ခဲ့ကြပေမယ့် “ဇိုမီး” ဆိုရင် ပိုပြီး ပြည့်စုံမှန်ကန်မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့လူမျိုး သမိုင်းနဲ့ ဘာသာဗေဒ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့ အဆိုအရနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုလည်း အင်္ဂလိပ်လို ပေါင်းတဲ့အခါ "Zomi National Day" လို့သာ ပေါင်းပါတော့တယ်။ "Chin National Day" လို့ဆိုရင်... ဒါဟာ မှန်ကန်တဲ့ Topic (or) Title တစ်ခု မဟုတ်တော့ပါဘူး။
(Anyway Ma Fri Angel is ever gre8! Keep the good work!!!)
PS: Hih comment penataktak-ah... na post simte' ading ka cihna hi zaw ei...
အိမ်ဂျယ်ရှပ်ပြာ ဆိုတာ ရှပ်ပြာရှပ်ပြာ ဆိုပေမယ့် ဒီလိုဆိုတော့လည်း လူကြီးဆန်သားပဲ...
ချင်းလူမျိုးတွေအကြောင်းကို အခုလို အများသိအောင် ပြောပြပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ အပြန်အလှန် လေးစားထိုက်တဲ့ အရာတခုပါ...
တဦးနဲ့ တဦး ဒီ့ထက်ပိုပြီး ချစ်ခင် ရင်းနှီးမှုရအောင် နောက်လည်း အခုလို စာမျိုးတွေ ရေးအုံးနော်...
23 February 2010 at 05:54
သူငယ်ချင်း၏blog Link ကို ပါ Refrence
ကိုယ့်မျိုးနွယ်အကြောင်း ကိုယ်သေသေချာချာ သိတော့ ဂုဏ်မငယ်ရဘူးပေါ့။ ဒီထက်ပိုပြီး ပြည့်စုံအောင် ရေးပါအုံး။
27 February 2010 at 05:26
တောင်ပေါ်ခေါင်ရည်ချိုမြမြ တကြိုက်လောက်သောက်ရင် အမောပြေ
ဒါဟာ လည်း ချင်းပြည်ရဲ့ ဓလေ့တခုပါ ..
ချင်းအမျိုးသားအားလုံး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဘ၀ကို အကောင်းဆုံး ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ
သမီးကြီးရေ.... တကယ် ပျားတုတ်နေလို့ ခုမှရောက်တယ်... ချင်း အကြောင်းလေးဖတ်သွားတယ်... ချစ်စရာကောင်းတဲ့ တိုင်း၇င်းသားတွေပဲနော်...
ချင်းလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးသားမှုကို ချင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဖြစ်တဲ့ ကိုယ်အများကြီး သိနားလည်ပါတယ်။ ဖြူစင်ရိုးသားပြီး အပြစ်ကင်းတဲ့ ချင်းမလေးကို သတိရနေပါတယ်။
ချင်းအမျိုးသားနေ့မှာ သိပ်ပျော်ခဲ့မှာပဲနော်။ သီချင်းတွေရော ဆိုခဲ့သေးလား?
အစစ ဂရုစိုက်ပါ ချင်းမလေးရေ...
ကိုယ်အမျိုးသားနေ့ ကို မမေ့ပဲ အမှတ်တရ အဖြစ် ပိုစ်လေးတစ်ခုရေးနိုင်တာ လေးစားပါတယ် တူမလေး။မအားတဲ့ကြားက လာရောက် အားပေးဖတ်ရှု့သွားပါကြောင်း။ ပျော်ရွှင်အေးချမ်းပါစေဗျ...။